September 2019 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Al-Shabaab oo War Rasmi Ah Kasoo Saartay Weerarkii Ballidoogle Iyo Khasaaraha Dhimasho oo 70 Kor U…
cusmaan	 Sep 30, 2019 0
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa goor dhow baahisay bayaan ku qoran luqaadda Ingiriisiga, kaasoo ugu horreyn lagu faahfaahiyay sida uu u dhacay hawl galkii maanta. Bayaanka oo uu soo saaray Maktabka Warfaafinta ee Xarakada…
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Barnaamijka Dhuuxa Wareysiyada waxaa soo jeedinaya…
Dhageystayaasha iyo akhirstayaasha ku xiran Mareegta idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan, waxay had iyo goor halkan kala socon karaan wararka iyo barnaamijyada ay idaacaddu baahiso. Maanta waa isniin Waxay taariikhda hijriga ku beegan…
DEG-DEG: Inkabadan 100 Askari oo lagu dilay Howlgalka Ka socda Ballidoogle.
Axmad	 Sep 30, 2019 0
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa shaaca ka qaaday khasaare horudhac ah oo ka dhashey weerarka culus ee dagaalyahanno katirsan Ciidamadeeda ay ku qaadeen saldhiga Ballidoogle oo ah saldhiga ugu weyn ee Maraykanku ku leeyahay…
Saraakiil Caddaan ah Oo lagu weeraray Muqdisho.
Kolonyo ay la socdeen saraakiil cadaan ah oo katirsan midowga Yurub ayaa lagu weeraray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Qarax xoogan ayaa lala eegtay kolonyada xilli ay mareysay meel u dhow kulliyadda, waxaana jira waxyeello dhimasho…
Bayaan kasoo baxay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa looga hadlay weerarka culus ee ka soconaya xerada Ballidoogle oo ah saldhiga ugu weyn ee ciidamada Maraykanku ku leeyihiin Soomaaliya. Bayaanka waxaa lagu sheegay in…
WAR DEG DEG: Al-Shabaab oo weerar culus ku qaaday saldhiga Maraykanka ee Balidoogle, iyo qaybo kamid…
Ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa goordhowr kahor weerar lixaad leh ku qaaday saldhiga ugu weyn ee ciidamada Maraykanku ay ku leeyihiin Soomaaliya kaas oo ku yaalla Garoonka diyaaradaha ee Balodoogle. Weerarka oo bilowday daqiiqado yar…
Xafladaha Ay Soomaalidu Dhigtaan Maxaa Looga Cabaa Cabitaanada Dibadda? (Dhageyso)
Haween Soomaaliyeed oo la hadlay Idaacadda islaamiga ee Al-Furqaan ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dadku cabitaan ka dhigtaan khudaarta kasoo go'do wadanka, taas bedelkeedana ay iska daayaan cabitaannada laga keeno wadanka…
Gawaari Ciidamada Shisheeyaha Looga gubay Qaraxyo ka dhacay Muqdisho.
Gelinkii dambe ee maalintii shalay, waxaa magaalada Muqdisho qaraxyo lagula beegsaday ciidamo katirsan kuwa Shisheeyaha ee duulaanka ku jooga Soomaaliya. Labo Qarax oo aad u waaweyn ayaa lagu qarxiyay gawaari booyado ah oo kamid ah kuwa…